BMW 325 - ubuso obusha nomlingiswa ongajwayelekile
Kunezinhlobo eziningi zezimoto zesiJalimane ezingathandi umshini wangemuva. Kuzo zonke izimoto ze-BMWs ezidalwa ngazo. I-"troika" ebuyekeziwe ephethe isiqalo esithi "xi" isipho esijabulisayo kakhulu nge-drive egcwele, okunikeza umshayeli injabulo yangempela yokushayela. BMW 325XI - izinga lokulawulwa kwemoto evela eBavaria! Futhi manje sizokwazi ukuthi sisondelene nale nqubo enhle!
Ukuguqulwa kwamakhadikhadi omzimba wesigcawu sesithathu sezimoto kwamvumela ukuba abe nesibindi futhi abe omele. I-grille isibe sikhulu, i-hood line ishintshile, izibani zangaphambili ziye zaba nzima. I-bumper yangaphambili ithole ubuhle obuningi. Izibani zamabhomu zavela kuso . Ukuphazamiseka kokugcina kokuguqulwa kwanda kwamaphiko aphezulu, engxenyeni engenhla lapho izinkomba zesikhombisi se-lateral ziphenduka. Zonke lezi zinguquko zenze ukuthi i-BMW 325 ibonise ngokucacile, enobudlova futhi inamandla.
Abathandi bokushayela okusheshayo bayokujabulela izici ezintsha ze-system entsha yeBavarian DSC yokuzinza, okunikeza umshayeli inkululeko enkulu uma eshayela.
Futhi kufanele uqaphele ukuthi ku- BMW 325 kwakukhona izinkinobho eziningana ezimbalwa, okubekwe ochungechungeni olwedlule. Isibindi se-headlamp sithole isikhundla esisha se- "Auto", esishintsha ngokuzenzakalelayo ubhontshisi obotshiwe. Ngaphakathi kwephaneli eliphakathi kwe-BMW yonke-wheel drive kwakukhona inkinobho yokuqalisa ye-HDC (i-Hill Desert Control), evumela ukugcina ijubane eliphansi ngesikhathi sezintambo eziphansi. Kwakukhona "umfutho" omnandi wabashayeli - ngosizo lwenkinobho kwaba khona ukulawula ukukhuliswa noma ukwehlisa ingilazi ye-trunk lid.
Ngokuhlukanisa ukuhlukanisa uhlelo olufakiwe lwe-audio Harman / Kardon. Kuzwakala kuhle. Kukhona ithuba lokudala ngaphakathi emotweni umphumela wehholo lekhonsathi.
Isondo lokuboleka libolekwe kumodeli we-M3, izihlalo zihlotshiswe ngekhilimu lesikhumba futhi zisekelwa ngokuphawulekayo.
I-BMW 325 ifakwe uhlelo lokusabalalisa okhethekile phakathi kwama-axles. Amaphesenti angamashumi ayisithupha nambili njalo adluliselwa emasondo angemuva, namaphesenti angamashumi amathathu nesishiyagalombili kuya kumavili angaphambili. Lokhu kukuvumela ukudala uhlamvu oluyingqayizivele lwe-BMW. "I-Troika" iziphatha ngendlela ephelele emgwaqweni ophuthumayo, uzizwa ngokuzethemba njenge-skid. Idrayivu ephelele yomsebenzi wayo isebenza ngamaphesenti angukhulu! Ukumiswa, noma kunjalo, kunzima. Kodwa lokhu kuhlanganisa kuphela abalandeli bomlingiswa wemoto yemidlalo.
Ngaphansi kwe-"German" injini engama-cylinder engama-2.5 amalitha. I-torque esiphezulu yi-250 Nm. I-gearbox yokuzenzekelayo isabela ekunikezeni igesi futhi iyakwazi "ukusetshenziselwa" ubuntu bomshayeli. Lapho i-lever isuswa ngakwesobunxele, imodi yezemidlalo yokushayela ivaliwe. Ngemuva kwalokho, i-electronics ngeke ivule i-overdrive kuze kube yilapho inaliti ye-tachometer ingena endaweni ebomvu. Ngaphezu kwalokho, kungashintsha ngokuzimela kumuntu ophansi ukugcina injini yejubane. Naphezu kwayo yonke inkululeko yokusebenza, "umlindi" we-elektronike ngeke avumele injini ukuba ilayishe ngokweqile futhi ishintshe isivinini yedwa.
I-BMW 325 ye-wheel drive yonke eyenzelwe labo abathanda ukushayela izimoto, bajabulele ukushayela. Futhi yilokho umshayeli omuhle adinga emotweni enhle!
Kanjani ukufunda ukushayela
Bespokrasochnoe ekususeni nezakhamuzi: Technology kanye nokubuyekeza
Mercedes SLK: design, izincazelo kanye intengo imoto
I-Nissan Gloria: isithombe, izibuyekezo, ukucaciswa kobuchwepheshe
Sporty futhi zakudala "Chevrolet Cruze" nqola. Izibuyekezo akhayo!
Ukulungisa kanye nokugcinwa Iran Khodro Samand
I etymology kwegama elithi "jeans". Umbono sezilimi imfashini
Izinga lokushisa emzimbeni okuphansi. Izimbangela yalesi sifo.
Kanjani Lizunov wokushefa Foam: indlela elula kunazo futhi evikelekile
Izikhangibavakashi emuva ngesikhathi: kanjani futhi nini ithelevishini yokuqala
Rhinitis Atrophic: amafomu, izimpawu kanye nokwelashwa
Isenzo "fenazepama" emzimbeni womuntu
8 izimfanelo ezikhangayo abantu abazifunayo kumlingani
Ian Somerhalder - Filmography. Zonke amafilimu ne umlingisi Ifaka
"The Life of Mnumzane de Moliere": inoveli Mihaila Bulgakova
Doogee X5: i Uhlolojikelele, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Indlela tie spokes Sledkov: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo nencazelo